नेपाली गीत संगीतको तितो यथार्थ - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
गायिका स्मृति पोखरेलले लेखेको स्टाटस साप्ताहिकमा प्रकाशित भएपछि प्राप्त प्रतिक्रिया–
कस्तो जीवन्त यथार्थ पोख्नुभयो स्मृतिजी । सत्यता पैसाभित्रै हरायो । इमान पनि पैसामै बिक्न थाल्यो । यही त गजब छ नि हाम्रो समाजमा । स्वार्थीहरूको बाक्लो भीड छ । कि हराइन्छ ,कि त पैसाले आफैंलाई बेचिन्छ ।
प्रिय बहिनी स्मृति, गीतको शब्द राम्रो छ, मैले मेरो शब्द भनेर भनेकी होइन । भिडियो पनी राम्रो बनेको छ । अरू कुरा सिक्दै जाने हो, विदेशमा बसेर गीत–संगीतलाई माया र निरन्तरता दिन जो–कसैले सक्दैनन् । प्रयास राम्रो छ । अगाडि बढ्दै जाऊ— शुभकामना । जय संगीत †
आफूले ‘राम्रो’ भनेर चिनेकाहरूले मात्र राम्रो गीत लेख्ने, राम्रो संगीत एरेन्ज गर्ने, राम्रो लय दिने, राम्रो रेकर्डिङ गरिदिने भ्रम पालेर बसेकै कारण तपाईंले यस्तो दु:ख पाउनुभएको हो ।
बल्ल चेत खुल्यो हजुरको, खुसी लाग्यो । पहिल्यै यति कुरा बुझ्या भए कति राम्रो हुन्थ्यो ! संगीतकै लागि भनेर मरिमेट्ने हामी सोझासीधालाई कहिल्यै वास्ता गर्नु भएन । मैले त मिडिया कभरेज गर्न हजुरसँग पैसा मागेको थिइनँ । कति बोलाएँ, वास्तै गर्नु भएन । अहिले ठगहरूको चंगुलमा परेपछि आँखा खुलेछ । अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । सही मानिसमार्फत काम गराउनुहोस्, तपाईं माथि नै पुग्नुहुन्छ । तपाईंको स्वर र गलाअनुसारको गीत खोजेर गाउनुहोस् ।
संगीत माफियाहरूको कमी छैन हामीकहाँ । सांगीतिक माफिया जबसम्म जीवित रहन्छ तबसम्म नेपालको सांगीतिक आकाशमा तँुवालो लागिरहनेछ, जसले गुणस्तर होइन, केवल व्यापारीकरण गरिरहन्छ र लुटिरहन्छ हरेक पल, हमेसा ।
लक्ष्मण भन्तना शिरीष
सबैले यस्तै सोच्दै जानुभयो भने ती दलालहरूको अन्त्य चाँडै हुनेछ । आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुहोस्, बाँकी भगवान भरोसा ।
अझ एरेन्जरले कति महिना झुलाउँछन्, स्टुडियोले फाइनल अडियो दिन कति महिना झुलाउँछन् ? त्यो त लेख्न छुटाउनुभएछ । यो नेपाली समाजको चलन नै हो ! यस्तो बानी छुटाएर छुटाउन सकिँदैन ।
वास्तविकता अनि तीतो यथार्थ । गीत–संगीतका नाममा लुट मच्चाउने सबैमा रिप । एउटा स्रष्टाले कति मेहनत गरेर गीत तयार गर्छ, हजारौं खर्च गरेर अडियोसम्म बनायो अनि मिडिया र कम्पनीको हात जोड्नुपर्ने । कसरी पाउने ? पैसा नहुने हामीजस्ता स्रष्टाले स्थान र सम्मान यो देशमा ।
तपाईं–हामी विदेशमा बस्नेलाई गार्‍हो छ । नेपालमै बस्नेलाई केही सजिलो छ ।
तिमीभित्रको भडास थोरै भए पनि देखियो । खुसी लाग्यो स्मृति ।
मन छुने कुरा आयो ।
रमेश क्षेत्री, अंगेला श्रेष्ठ, दिलीपकुमार पोखरेल
के गर्नुहुन्छ ? नेपालमा प्रतिभाको कदर हँुदैन । हजुरले भनेको सबै कुरा एकदमै सही हो । यो तपाईंको मात्र पीडा होइन, सुपरस्टार बन्न चाहने लाखौं प्रतिभाको पीडा हो ।